Blogs | Inya Economics | Page 4
၂၀၂၀ အထွေထွေရွှေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်အခြေပြုပါတီများ၏ ကတိကဝတ်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း
၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်မ အခြေပြုပါတီများ၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကတိကဝတ်များ၊ စဉ်းစားချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍအသီးသီးခွဲ၍ လေ့လာထားပါသည်။ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ ပြည်သူ့မူဝါဒရေးရာဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များ စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Read More...
Introducing Crowd Farming Concept to Myanmar Agriculture
What is Crowdfarming? How does it work? Crowdfarming is relativelyanew concept which is initially created by two Spanish Read More...
၁၉၄၇ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၆ရက်နေ့ ဆာရန်တိုဗီလာခန်းမမှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကွန်ဖရန့်ကို ကျင်းပပါသည်။ ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီး တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲကြရန် ပညာရှင်များ ဝါရင့်အစိုးရ အရာရှိကြီးများနှင့် ဖဆပလကြားဖြတ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။။ တက်ရောက်သူများ အထဲတွင် နောင်အခါ Read More...
မျက်မှောက်ခေတ် အိန္ဒိယ-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ကောက်ကြောင်းအကျဥ်း (စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အလားအလာကို လေ့လာကြည့်ခြင်း)
ရေးသားသူ- ဟိန်းသန့်ဆွေ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးအကြောင်းကို ပြောဆိုဆွေးနွေးကြရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးကိုသာ အဓိကထား၍ ပြောဆိုဆွေးနွေးလေ့ရှိကြသည်။ ထိစပ်နေသော ရှည်လျားသည့် ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ်၊ များပြားသောလူဦးရေ၊ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအရ အရေးပါမှုတို့ရှိသည့် မျက်မှောက်ခေတ် Read More...
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြိမ်းခြောက်နေသော ကြွပ်ကြွပ်အိတ်သုံးစွဲမှုနှင့် စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုတို့၏ အန္တရာယ်
ရေးသားသူ- မေပြည့်စိုး နိဒိန်း ကြွပ်ကြွပ်အိတ်များသည် ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိ အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် လူနေမှုဘဝတွင် နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြသော ပစ္စည်းအဖြစ် နေရာယူ ဝင်ရောက်လာသည်။ ၎င်းသည် စွန့်ပစ်အမှိုက်များထဲ၌ သဘာဝ Read More...
နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီသက်တမ်း ရင့်သန်လာသည်နှင့်အမျှ ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပသော ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများသည် အထူးအရေး ပါလာပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများ ရေးဆွဲရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေနှင့် Read More...